Sida loo rogo ama Videos TOD on Mac OS (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Mac > Sida loo Beddelaan TOD (M2T) faylasha loogu Mac (Yosemite ka mid ah)
1. Waa maxay ee TOD
Video file qabtay a JVC Everio video camera waa la badbaadin doonaa qaab lahaansho loo yaqaan TOD. Qaab file TOD waxaa la abuuray by JVC oo loo isticmaalo kala duwan oo ay fiidiyo-qeexidda sare (tusaale ahaan JVC Everio). Warbaahinta duubo ee TOD qaab fiidiyo oo ay ku jiraan Hard drive disk iyo kaararka xusuusta adag-state. Waxaa isticmaali MPEG-2 video riixo iyo MPEG-1 audio riixo. Size video jir ee pixels waa 1440 x 1080 ama 1920 x 1080 iyo ratio video dhinac yiilleen waa 16: 9. The .tod qadarin ah file waxaa la xusaa fiidiyo laakiin isbedel ku .m2t halka laga keeno si computer.
2. Sida loo badalo TOD (M2T) si MOV, AVI, wmv, MP4, iwm on Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah)
Waa maxay baahida loo qabo in waxa kaliya ee ka Converter TOD u Mac . The version Intel waa u Macs la processor Intel ah, halka PowerPC u Mac kombiyuutarada la Apple ee PowerPC processor. Free download Converter TOD haboon Mac u kiiskaaga.
Ka dib booqasho uu ku tagay meel dan ama aroos ah qaraabada, waxaad ka heli kartaa qaar badan oo videos camera cajiib ah sida kubadii oo ka mid ah wax macno leh. Si kastaba ha ahaatee, ma aha in aad u qanciso in aad ka arki kartaa oo kaliya on camera sida aad si toos ah iyaga dajiyaan kartaa Mac ama ciyaartoy la qaadi karo.
Tani Converter Mac TOD waa barnaamij wanaagsan in la badalo TOD (.tod, .m2t) files si AVI, MP4, wmv, ASF, 3GP, 3GPP, QuickTime (MOV), Mpg, MKV , iwm, markaas aad ku raaxaysan karaan camera aad jeceshahay videos on telefoonka gacanta, ciyaartoyda digital sida iPodiPhone 3G, internetka, iyo xataa edit in iMovie, iDVD.
3. Hardware Products ee JVC TOD kaamirada
• 2007: GZ-HD7 (HDD, SD card / SDHC), GZ-HD3 (HDD, SD card SDHC /)
• March 2008: GZ-HD5 (HDD, kaarka MicroSDHC), GZ-HD6 (HDD, kaarka MicroSDHC)
• June 2008: GZ-HD30, GZ-HD40 (HDD, kaarka MicroSDHC, TOD, waxa uuna ku duubo AVCHD)
4. Sida loo ciyaaro TOD (M2T) files on Mac for free
Sida loo ciyaaro TOD on Mac Snow Leopard ama Libaaxa? Qaab TOD ayaa si fudud waa MPEG2 formatted file video. Inkastoo TOD uu u dhigmo iyada oo AVCHD, ma waxaa si toos ah u ciyaaray karaa qalabka macaamiisha video. Haddii aad rabtid in aad u argto faylka on your computer, waa lagu soo waramayaa in ay si ammaan ah magaca dheeraad ah ka TOD in Mpg ama M2T.
Sida caadiga ah, waxaan isku dayi kartaa Mplayer OS X iyo VLC ciyaaryahan warbaahinta maadaama ay yihiin ciyaartoyda madal-gaarka ah ee files TOD. Dadka isticmaala Mac, waan ku faraxsanahay in ay bartaan Apple iMovie HD si toos ah u furi karo files TOD ah.
5. Sida loo soo saaro audio ka TOD (M2T) on Mac (Mountain Libaaxa taageeray)
Marka aad rabto in aad file a jecel audio si ay u tagaan oo aad ugu jeceshahay videos camera, waa ay fududahay in la kulanto dhibaato ku saabsan sida loo soo saaro audio ka files video. Waqtigaas, waa doorashadaada fiicnayn in la siiyo eegno wanaagsan Converter TOD u Mac . Waxaad ka heli kartaa files audio la qasabno oo kaliya dhowr, waxa ka badan, waxaa taageero aad si loogu badalo ka files audio in qaab badan sida MP3, M4A, regelingen, AC3, AAC, MKA, OGG, iwm
6. Sida loo jar, dalagga, ku dar saamayn TOD (M2T) video on Mac
Haddii aad rabto in aad ka clips ugu fiican ee videos camera xaqa, waxaad jar kartaa video ay doorataa waqtiga ku bilaabatay iyo dhammaadka wakhtiga. Sidoo kale, tan oo dhan-in-mid Mac TOD Converter , waxaad ku dari kartaa saamaynta dheeraad ah si aad video files, waxay jecel yihiin in la beddelo dhalaalka videos ah, in ay ku milmaan badan videos galay mid ka mid file.